UMthetho WOKUPHEPHA - Mayelana ne-cannabis & Ukufinyelela ebhenki
Secure & Fair Enforcing (SAFE) Act
UKheshi uyinkosi - Ngakho-ke iCongress yethule omunye wemithetho eminingi ye-cannabis - Umthetho weSAFE.
Umthetho Oqinile Wokulondeka Nokuvikeleka
Lokhu kwakungomunye wama-YouTubes okuqala engawenza ngoFebhuwari ka-2018.
Ngenhlanhla, ngikwazi kahle endabeni ethile. Ngikhuthele emsebenzini ngakha okuqukethwe okwengeziwe - le webhusayithi ifakiwe - ukuze ngikwazi ukuqhubeka kuthunywa sethu esabiwe sokufaka imithetho ye-cannabis ngokuhambisana neqiniso lezinto.
Ngiyacela ungithinte ekuxhumaneni nomphakathi uma ngingakusiza.
Landela ku-Social Media
"Kuze kube uHlelo 1 lwe-cannabis luyinto yesikhathi esidlule, akukho ukukhetha kodwa ukubhekana ngokheshi"
Izinsiza Ezinhlobene Okuqukethwe Komthetho Wokubhange kwe-SAFE:
incwadi yami ngemithetho ye-cannabis
Umthetho weSAFE wenze okuthile okuvele kwehlise i-cannabis kusuka ku-Controlled Sub zinthu Act (“CSA”). - okungukuthi, vumela amabhizinisi asemthethweni we-cannabis ukuthola usizo lwezezimali. Sizinikezele ekuguquleni ibhizinisi elisemthethweni eliwumthetho kuphela eMelika libe elinye ibhizinisi laseMelika.
ICongress ithathe izinyathelo zokubuyisa imali uJeff Svery kanye nabasebenzi bakhe “ababi ababhemayo” eMnyangweni Wezobulungiswa, kodwa kabathatanga zinyathelo lokususa iCannabis e-CSA. Kodwa-ke, kusukela ngonyaka we-2013 iCongress ibeke umthetho onjengeSAFE Banking Act, efuna umbuzo kuphela - noma iphakamise umbuzo othi: Kungani wethula umthethosivivinywa owenzelwe ukufa?
ICongress akufanele ifune ukunqoba ukwethula umthethosivivinywa iyazi ukuthi isehluleki ngoba iKomidi Lebhange liqhutshwa ngumuntu ozwakala kabi kakhulu eSenate nase-anti-cannabis Republican, UMike Crapo. Idaho - enye into ebizwe ngegama elingafani nalutho - ibona kufanelekile ukubeka iCrapo eHhovisi, esivimba umthetho osabekayo we-cannabis onikeza amaBhange amandla okugcoba amasondo embonini ye-cannabis kumashumi ezigidigidi zamaRandi, noma ngaphezulu.
USenator omuhle ovela e-Oregon kufanele ayeke ukuchitha isikhathi sethu, nesikhathi sikaCrapo, bese wethula umthethosivivinywa wokulahla i-cannabis evela e-CSA. Kungase futhi kwehluleke, kepha okungenani ama-60% abantu baseMelika bafuna iCongress ukuthi iphasise umthetho osemthethweni we-cannabis. Ngemuva kwalokho, okungenani, sinomugqa owodwa singagxilwa sonke kithi ekulweni futhi sinqambe amanga aneminyaka engu-80 okuyiyo eyenqabela insangu.